संक्रमित गर्भवतीलाई कोरोना अस्पतालले भर्ना लिएन, घरमै अक्सिजनको भर – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ११ आश्विन २०७७, आईतवार १४:५८
११ असोज, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज रामगढवाकी २६ वर्षीया महिलालाई शनिबार अचानक स्वासप्रश्वासमा समस्या देखियो । हल्का ज्वरो आउनुका साथै खोकी पनि लागिरहेको थियो ।
आफन्तले तुरन्तै सीता अस्पताल पुर्‍याए । ती महिलाको गर्भको नियमित जाँच गरिरहेको प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा‍. निलम चौरसियाले स्वास प्रश्वासको समस्या भएकाले जनरल फिजिसियनलाई देखाउन सल्लाह दिइन् ।
त्यसपछि उनलाई एडभान्स अस्पताल लगियो, त्यहाँ डा. उदयनारायण सिंहले जाँच गरे । जाँच गर्दा कोभिड संक्रमणको शंका लागेपछि पीसीआर परीक्षणका लागि नारायणी अस्पताल पठाएको डा. सिंह बताउँछन् ।
प्रयोगशालाले अपरान्ह ४ बजेतिर उनलाई कोरोना संक्रमण भएको खबर गर्‍यो । गर्भवती, त्यसमाथि लक्षणसमेत भएकाले नारायणी अस्पतालले कोभिड अस्पताल लैजान सुझाव दियो, तर नेसनल मेडिकल कलेज कोभिड अस्पतालले राख्न नसकिने जवाफ दियो । आफन्त अलमलमा परे ।
गुनासो गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय गएका आफन्तलाई प्रहरीले गेटबाटै चिकित्सकले भने अनुसार गर्नू भनेर पठाइदिए । त्यसैले हाल गर्भवतीलाई घरमै राखिएको छ ।
‘ज्वरो खोकी छ, गर्भवती महिला संक्रमित हुनुहुन्छ भन्दा पनि नेसनल मेडिकल कलेजले स्थापना गरेको बाबा आइसोलेसनमा राख्न मानेनन्’ नारायणी अस्पतालमा समेत कार्यरत डा. सिंहले भने ‘बेडको व्यवस्था हुन नसकेपछि आफन्तले घर छेउमै मेडिकल पसल छ, घरमै राख्छौं भनेर लैजानुभयो ।’
अहिले आफूले नियमित सम्पर्कमा रहेर परामर्श दिइरहेको डा. सिंह बताउँछन् ।
पहिले कोरोना विशेष अस्पतालको रुपमा सञ्चालन भएको नारायणी अस्पतालमा भने हाल जनरल सेवा सञ्चालन गरिएको छ र कोरोना संक्रमितको उपचार गरिएको छैन ।
कोरोना संक्रमितको संख्या घटेपछि अस्थायी कोरोना अस्पताल वीरगञ्ज हेल्थकेयर पनि जनरल अस्पतालमा परिणत भइसक्यो । गण्डक अस्पतालका सबै संक्रमित डिस्चार्ज भइसके । अब वीरगञ्जमा नेसनल मेडिकल कलेजले सञ्चालन गरेको अस्थायी कोरोना अस्पताल (बाबा होटल आइसोलेसन) मात्रै सञ्चालनमा छ । नारायणीमा आईसीयूसहित १५ बेडको अब्जर्भेसन वार्ड छ ।
वैकल्पिक व्यवस्था नगरी धमाधम कोरोना अस्पताल बन्द गरिँदा बिरामीहरु भने मारमा परेका छन् । यसअघि वीरगञ्जमा मृगौला रोगीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा डायलायसिस गराउन समस्या भएको थियो ।
सुत्केरी हुने दिन नजिकिँदै गर्दा अस्पताल लैजानुपर्नेमा उल्टै संक्रमित भएकै कारण घरमा ल्याएर राख्नु पर्दा आफन्त चिन्तित छन् । सामान्य अवस्था भएको पभए घरमै राख्दा डर हुने थिएन । तर उनको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छैन । शनिबार रातिदेखि अक्सिजन दिइएको छ । १५ हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर आफन्तले घरमै अक्सिजनको बन्दोबस्ती मिलाएका हुन् ।
सबैतिर हारगुहार गर्दा अस्पतालले राख्न नमानेपछि घरमै ल्याएर राख्नुपरेको संक्रमितका दाजु दिनेश पण्डित बताउँछन् । ‘कोरोना लागेका किरामीको कोरोना अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, हामीलाई त घरमा पठाइदिए’ उनले अनलाइनखबरसँग भनेका छन् ।
संक्रमित गर्भवतीको स्वास्थ्य रेखदेख गर्दै आएका स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी जितेन्द्र शर्मा पनि अस्पतालमा राखेर उपचार गर्दा राम्रो हुने बताउँछन् । ‘चिकित्सकको परामर्श लिइरहेका छौं, तर अक्सिजन चढाउनु पर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ’ उनले भने, ‘पहिला दमको बिरामी भएकाले अस्पतालमा लैजान पाएको भए हुन्थ्यो ।’
नेशनल मेडिकल कलेजका कोभिड फोकल पर्सा डा. असरफ हुसैनले भने मृगौला रोगी, गर्भवती तथा सुत्केरी संक्रमितलाई राख्ने व्यवस्था नभएको बताए । सम्झौता गर्दा नै यस्ता बिरामी नराख्ने भनी प्रष्ट लेखिएको उनले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले घुमाउरो शैलीमा त्यसलाई स्वीकार गरे । ‘शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थाका संक्रमितलाई उपचारका लागि अफिन (निजी स्वास्थ्य संस्था) को तर्फबाट आशाराम अस्पतालसँग शुक्रबार सम्झौता गर्नुपर्ने हो, तर नारायणी अस्पतालले सम्झौता हुन नसकेको जानकारी गराएको छ’ उनले भने ‘गर्भवतीलाई घरमा राखिएको विषयमा तपाईबाटै जानकारी आएको हो, नारायणी अस्पताललाई नै आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउन भनेको छु ।’
रोजगारी खोसिएको भन्दै पर्यटन मजदुरको प्रदर्शन
चीनको शर्त – रसुवागढी नाकामै पीसीआर मेशिन राख